बाथरूम मा कुना तखता: को आकार, प्रकार, फोटो
एक ठूलो बाथरूम संग आधुनिक अपार्टमेन्ट मा केही मान्छे। तिनीहरूले राम्रो हेर्न र कार्यहरु को एक पर्याप्त संख्या प्रदर्शन गर्न आवश्यक - कि यो सुसज्जित किन, तपाईंले सही सामान रोज्नुपर्छ छ। कुना बाथरूम मा तखता एउटा सानो क्षेत्रको लागि आदर्श हो, त्यसैले यसलाई समग्र लकर धेरै भन्दा यसलाई प्रयोग गर्न राम्रो छ।
खरिद गर्दा मुख्यतया भौतिक मा ध्यान गर्नुपर्छ। यो मात्र होइन टिकाउ, तर थर्मल आघात, चिस्यान पनि प्रतिरोधी हुनुपर्छ विभिन्न यांत्रिक तनाव सामना। यो फर्नीचर संग लामो समय टिक्न र बस मालिक खुसी छैन।
सायद एउटा सानो कोठा मा सबै भन्दा राम्रो विकल्प बाथरूम मा पनि कुनामा तखता, hinged वा दूरबीन हुनेछ। यसलाई धेरै ठाउँ बचाउँछ र कुराहरू धेरै भण्डारण गर्न अनुमति दिन्छ। अझ विशाल परिसर लागि समतल वा रैक चयन गर्नुपर्छ।
समतल को नियुक्ति
नियम, तिनीहरूले सधैं बाथरूम मा हात हुनुपर्छ भन्ने अधिकांश आवश्यक कुराको समतल राखिएका छन्। सम्पूर्ण सूची पहिचान गर्न सकिन्छ gels, क्रीम, शैंपू, छुरा, toothbrushes, विभिन्न कस्मेटिक्स बीचमा।
फर्निचरहरू बजार मा प्रस्तुत छ, जो सबै समतल, चिस्यान र तापमान अचाक्ली प्रतिरोधी हो। आफ्नो indisputable फाइदा सानो आकार छ। राम्रो सञ्चालन निर्माताहरु सतह चिल्लो बनाउन र पानी घृणा उत्पन्न विशेष पेंट्स यसलाई कवर।
यो खरीदार यो साँच्चै काम गर्छ कि मोडेल पत्ता लगाउन सक्षम छैन भनेर असम्भाव्य छ। अब सीमा शाब्दिक छ प्रत्येक जो आफ्नो फारम, सामाग्री र रंग मा भव्य छ नयाँ उत्पादन, साथ explodes।
एक शेल्फ कसरी चयन गर्ने?
पत्रिका मा, बजार मा, पसलहरुमा - सही तखता चयन गर्न, प्रयोग एक महिना पछि यसलाई दिन छैन अप, तपाईं तुरुन्त सबै विकल्प हेर्न आवश्यक छ। तपाईं परिमार्जनहरू सबै प्रकारका बारेमा थाहा पूर्ण जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। नमूना को विशेषताहरू यस लेखमा छलफल गरिनेछ।
बाथरूम मा कुना तखता काठ, प्लास्टिक, ग्लास, धातु को हुन सक्छ। जब तपाईं खरीद भर्खरै ध्यान आवश्यक छ। नियम, यी nuances उत्पादन को मात्र होइन जीवन, तर पनि समग्र भित्री डिजाइन छ।
समतल झुन्डिएको आफ्नो धेरै अनावश्यक वस्तुहरू अव्यवस्था योजना गर्दै नगर्ने र केवल कोठा को शैली मा पूर्ण फिट हुनेछ सबैभन्दा आवश्यक कुरा को लागि प्रयोग गरिनेछ ती लागि उपयुक्त।
शायद जो कोहीले भन्न हुनेछ एक कुनामा तखता अतिरिक्त तत्व - बाथरूम मा स्थापित। फर्नीचर को बहुमुखी टुक्रा - यो तपाईं यस फर्नीचर वर्णन कसरी छ। यो एउटा सानो कोठामा ठाउँ सुरक्षित र स्पेस enliven हुनेछ। यसबाहेक, कोण सामान्यतया बाथरूम मा प्रयोग गरिन्छ छैन, त्यसैले, यो समतल फिर्ता सेट, तपाईं निकै यी साइटहरु को कार्यक्षमता विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ। यो निर्णय तर्कसंगत प्रयोग स्पेस हरेक सेन्टिमिटरले अनुमति दिन्छ।
एक बाथरूम मा तखता अक्सर चूषण कप को माध्यम द्वारा स्थापित छ, त्यसैले यस विषयमा (पर्खाल सतह ड्रिल कुनै आवश्यकता छैन) को अर्को प्लस छ।
दूरबीन समतल को फाइदा तिनीहरूले सतहहरु बीच unclenched छन् भन्ने छ। Suckers तिनीहरूलाई दृश्यग्रिड पकड मदत। तर, यो नाजुक माउन्ट मानिन्छ किनभने, यो फर्नीचर भारी भार सामना गर्न सक्षम हुने छैन सजग हुनुहोस्।
सबै मानक तखता पनि कोणात्मक गर्न सकिन्छ। 0.3 मिटर वा बढी र गहिराई बाट - - यी आयाम निकै उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न औसत 0.5 मिटर धन्यवाद तिनीहरूले निम्न आयाम :. बारेमा 1 मीटर को उचाइ, चौडाइ छ। समतल मध्यम आकारको बाथरूम लागि थप उपयुक्त हो। तिनीहरूले कोठा को सबै भन्दा राम्रो सजावट हुनेछ यहाँ छ।
स्पेस एक धेरै एक hinged डिजाइन छ जो बाथरूम, मा भारी कुना तखता लागि आवश्यक छ। यो शायद सानो स्पेस प्रयोग गरिन्छ किन छ। तथापि, मानक मोडेल विपरीत यो अझै पनि सम्भव मा ठाँउ हो एउटा सानो बाथरूम। तर तपाईं यो अघि, तपाईं आफ्नो whereabouts असल विवरण विचार गर्न आवश्यक छ।
एउटा राम्रो विकल्प पर्दा झुन्डिएका कुना तखता - यो लुगा धुने मेसिन, शौचालय, बाथरूम माथि ठाउँ। को बढते को इच्छित उचाइ निर्धारण गर्न, यो कस्तो हुनेछ सामना गर्न आवश्यक छ। त्यस अवस्थामा, तखतालाई स्याम्पु, जेल वा कस्मेटिक उत्पादनहरु को लागि अभिप्रेरित छ भने, यसको स्थान व्यक्ति स्नान वा नुहाउनु लिएर आवश्यक लिन मुक्त थियो कि एक स्तर यस्तो हुनुपर्छ। प्रयोग मेजानाइन तखता, रूप, जो तौलिया वा केही बक्से भण्डारण गर्न ठाउँ हुनेछ। उत्तरार्द्ध विकल्प फर्नीचर विशाल र व्यापक आयाम चयन गर्न राम्रो हो, त्यसपछि यो सम्भव आकस्मिक गिर कुराहरू जोगिन छ। लगभग 30 सेन्टीमिटरको गहिराइमा संग तर कस्मेटिक्स सुट लागि संकीर्ण र संकुचित मोडेल।
यो विशाल कोठा उपयुक्त तल्ला कुना तखता, यो ठाउँ को पर्याप्त रकम हुनेछ। तर, यो यसको लाभ बन्द दिन्छिन्।
पहिले, सबै मोडेल उचाइ र आकार मा फरक। सरसफाइको लागि - दोश्रो, तल्लो समतल सामान्यतया सफा कुराहरू, माथि को भण्डारणको लागि आरक्षित छन्। यो तल्ला समतल को चरम शीर्ष सतह वा अलिकति पनि डुब्नु माथि थिए भनेर स्थापना गर्न मनमोहक छ। प्रयोग मा सजिलो प्रदान गरिएको छ, जबकि।
पर्खाल मोडेल मा निर्मित
एक धेरै रोचक विकल्प पर्खाल समतल मा निर्मित थियो। यो नकारात्मक स्थापना विशेषज्ञहरु सुम्पिएको हुनुपर्छ मात्र भनिन्छ गर्न सकिँदैन, तर यो पैसा को बर्बादी हो, तर यहाँ skimp छैन।
व्यवसायीक ठ्याक्कै तपाईं मास्टर गर्न चाहनुहुन्छ के गर्न लागि, तपाईंले वेतनभोगी मान्छे अभिमुखिकरण मदत र सही दिशा मा काम मार्गदर्शन हुनेछ जो रेखाचित्र को निर्माण, साथमा सुरु हुनुपर्छ।
केही मानिसहरू भन्ने बाथरूम दूरबीन मा एक कुनामा तखता छ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। यो, महंगा uncomplicated र मूल देखिन्छ कि डिजाइन हो भन्नुभयो छ। यो ठाउँ थप कार्यात्मक र सुविधाजनक बनाउन हुनेछ। रूपमा पनि कोठा को कुना मा सेट गरिएको छ सानो तखता, माथि मोडेल फरक छ। यसको मुख्य फाइदा - बदलन घटक। प्लास्टिक वा धातु बनेको छ जो आधार, तल राख्नु र यति fastened छ। को बेन्चहरूले, खुला सार्दै हुनुहुन्छ, कदम सजिलो प्रयोग गर्न बनाउन। एक कस्मेटिक उत्पादन पनि उच्च संग बोतल स्थिति गर्न, माथिल्लो र तल्लो सतहहरु बीच स्पेस राशि वृद्धि गर्न पर्याप्त हुनेछ।
यस संयन्त्र को loosening जोगिन, यसलाई पूर्णतया गम्भीर फास्टनरों को चयन लिन आवश्यक छ। तखतालाई ताले backstop संग सुसज्जित छ भने यो राम्रो हुनेछ, त्यसपछि सतह कि यसमा छन् कुराहरू को दबाब तल धकेल्न छैन।
बाथरूम लागि कुना ग्लास समतल त्यहाँ उज्यालो रंग वा flashy सामान कुनै जोर छ जसमा शास्त्रीय शैली को अनुहार छन्। तैपनि, हामी indifferent कुनै एक छोडेर विलासी, weightless, यो आँखा आकर्षित फर्निचरहरू देखि emanates कि निर्धक्क भन्न सक्नुहुन्छ। साथै, समतल पूर्ण कुनै पनि stylistic निर्देशन मा फिट।
ग्लास समतल आफ्नो आकार थप विशाल, परिसर अनुग्रह दिनुहुनेछ। तर यो आफ्नो शान नेगेट छैन। मुख्य लाभ को एक दृश्य विस्तार ठाउँ छ। तलका समतल मोडेल को सर्वोत्कृष्ट आकार फोटोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ।
अनिवार्य समतल मिरर - ग्लास को एक एनालग, तर केही फरक सुविधाहरू। अब प्रविधि अगाडी बढ्दै, त्यसैले ग्लास प्रकृया तपाईँलाई धेरै टिकाउ सामाग्री को एक बन्न अनुमति दिने, उच्चतम स्तर पुग्छ। शान र सौन्दर्य - आफ्नो दोस्रो नाम।
उपस्थिति मा जोर, चित्र प्रक्रिया गुणस्तर र भौतिक नै मिरर समतल धन्यवाद खुलेर सबै उपलब्ध बीच एक अग्रणी स्थिति कब्जा भने। मत्ती, रोकी रंग डिजाइन पूरक। यसलाई विस्तार र कोठा को भित्री पूरक गर्न सजिलो छ।
30-60 सेमी, गहिराई - - 30 सेमी यस्तो समतल को राशि विशेष सीमित छैन उचाइ, चौडाइ 1.5 मिटर 50 सेमी देखि भिन्न छन्।
बाथरूम प्लास्टिक लागि कुना तखता minimalism प्रेम र फर्नीचर को एक यस्तो टुक्रा मा धेरै पैसा खर्च गर्न तयार छैन गर्नेहरूका लागि उपयुक्त छ। यो सामाग्री कहिल्यै चिस्यान, उच्च वा कम तापमान, यांत्रिक तनाव, जोडे चोट हुनेछ। आफ्नो फाइदा बीचमा यो सुविधा र लामो सेवा जीवन आवंटित गर्न पनि सम्भव छ। यो फर्नीचर कुनै पनि डिजाइन, रूपमा ग्लास र दर्पण विकल्प रूपमा राम्रो सजाउनु, तर धेरै बुरा हेर्न छैन।
बजार मा प्लास्टिक को बाथरूम मा कुना समतल एक विशाल श्रेणी प्रतिनिधित्व। तिनीहरूले प्रत्येक अन्य देखि कारण ढाँचा, आकार, आकृति र रंग गर्न फरक। किनभने यो विशेष हेरविचार आवश्यकता छैन, केवल एक महिना सतह धेरै पटक हटाउन पनि सहज हुन्छन्।
कुनै पनि डिजाइन को हाइलाइट सबैभन्दा टिकाउ सामाग्री को सुसज्जित गरिनेछ - धातु। स्टेनलेस स्टील बनेको बाथरूम मा कुना तखता अक्सर प्रयोग गरिन्छ, तर तपाईं अझै पनि यो मोडेल मा रुचि रोक्न भने, परिणाम आश्चर्यजनक छ। यसको मुख्य लाभ - स्थायित्व, विश्वसनीयता र लामो सेवा जीवन।
तर ग्लास वा प्लास्टिक विपरीत, यो सामाग्री जंग गर्न प्रतिरोधी, तिनीहरूलाई विशेष हेरविचार गर्नुपर्छ लागि त हो। तथ्यलाई केही अवस्थामा पनि क्रोम मदत गर्दैन छ। खियाले र फिक्का रंग स्पष्ट अतिथि प्रभावित छैन। यसलाई आफ्नो स्टेनलेस स्टील प्राथमिकता दिन राम्रो त्यसैले छ। यो ग्लास र दर्पण लेपित संग राम्रो संयुक्त सक्षम छ। लोकप्रिय हालै एक नाजुक सतह छ धातु को रूपरेखा, हुन्छन्।
बाथरूम लागि कुना स्टेनलेस तखता: लाभ
यो ग्लास र प्लास्टिक धातु मूल्यहरु धेरै उच्च, गर्न विपरीत मा तखता एक बरु ठूलो रकम खर्च हुनेछ भनेर टिप्पण लायक छ। उच्च लागत स्टेनलेस स्टील को धेरै लाभ बन्द दिन्छिन्।
भौतिक यांत्रिक तनाव subjected छैन। यसलाई डेन्ट वा सतह बिगार्न गर्न गाह्रो छ। Scratching पनि rarity छ। तर, एक मानिस आफैले नतिजा मार गर्दा सबैभन्दा रमाइलो हुन सक्छ रूपमा होसियार हुनुपर्छ।
स्टेनलेस स्टील को सतह स्वच्छता रूपमा यस्तो सम्पत्ति छ। जसद्वारा संचित माटो को मात्रा कम छ यो कुनै pores, microcracks छ।
पानी प्रतिरोध - एउटा महत्त्वपूर्ण फाइदा। सामाग्री तापमान परिवर्तन, वाष्प र उच्च आर्द्रता को घटना withstands पानी प्रक्रियाहरु पूर्णतया प्रतिरोधी छ। को जंग प्रक्रिया पनि लामो समयसम्म संचार पानी सम्पूर्ण रूपमा हटाइएको।
डेस्कटप को मानक उचाइ
भान्सा "लिंडा" - तपाईं को लागि आविष्कार
रूसी कलाकार द्वारा चित्रहरु मा प्रतीकात्मक रूप
Chiffon स्कर्ट र तिनीहरूका प्रकारहरू
कसले एलिजाबेथ पछि शासन? बच्चाहरु Elizavety Petrovny Romanovoy
Coffered छत - सजावट विहीन छ
Necrosis, कारण, लक्षण, उपचार र रोकथाम को प्रकार
को railwayman को दिन मा बधाई
स्मारक "Sestroretsky विदेश"